खाडी र झाडीलाई तुलना गर्दा | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण खाडी र झाडीलाई तुलना गर्दा
लेख | दृष्टिकोण 226 views
खाडी र झाडीलाई तुलना गर्दा
पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो सतहमा पाइने करीब २ सय ४५ देखि ५ सय ४४ मिलियन वर्षअगाडि जैविक र सामुद्रिक जन्तुहरू मरेर सडेर जमीनको सतहको हजारौं फीट तल जम्मा भएको हाइड्रो कार्बनको तरल रूपलाई नै कच्चा तेल भनिन्छ । जमीनमुनिको तापक्रमले हाइड्रो कार्बन अन्त्यमा करोडौं वर्षपछि कच्चा तेलमा रूपान्तरण भएको हो । हजारौं हाइड्रोजन र कार्बन अणुहरू मिलेर हाइड्रो कार्बन परमाणुहरू बन्छन् र त्यही परमाणुहरूको मिश्रण नै कच्चा तेल हो । तसर्थ कुवाबाट शुद्ध पानी निकालेजस्तो जमीनबाट तेल आउँदैन, पहिले कच्चा तेल निस्किन्छ । पेट्रोलियम शब्द ल्याटिन शब्द पेट्रा (चट्टान) र ओलियम (तेल) मिलेर बनेको हो । खासगरी यसको अर्थ कच्चा तेल भन्ने हुन्छ भने अरू हाइड्रो कार्बनसँग जोड्दा तेल र ग्यास दुवै भन्ने अर्थ लाग्छ । कुनै हाइड्रो कार्बनको रूप तरलभन्दा पनि ग्यासयुक्त हुन्छ । मिथेन ग्यास हाइड्रो कार्बनको ज्वलन्त उदाहरण हो र यसलाई प्राकृतिक ग्यासको रूपमा पनि लिइन्छ । घरको भान्सामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कच्चा तेल अत्यन्त प्रज्वलनशील ऊर्जाको स्रोत हो र यसको अर्को प्रति उत्पादन हाइड्रो कार्बन, प्राकृतिक ग्यास पनि अर्को ऊर्जाको स्रोत हो । किनकि तेल या ग्यासको कुवा रित्तिएपछि पुनः रसाउँदैन । जमीन मुनिबाट विशेष खालको पम्प प्रयोग गरी तानिएको कच्चा तेलमा पानी, बालुवा, नून, प्राकृतिक ग्यास मिसिएको हुन्छ । प्रशोधनशालामा पठाउनुभन्दा अगाडि पानी, बालुवा, नुन र ग्यासलाई छुट्याएर तरल पदार्थलाई बुष्टर स्टेशनमा पठाइन्छ । बुस्टर स्टेशनबाट तानेर स्टोरेज ट्याङ्कमा पठाइन्छ र स्टोरेज ट्याङ्कबाट प्रशोधनशाला (रेफाइनरी)मा पठाइन्छ । त्यही स्टोरेज ट्याङ्कबाट नै पाइपलाइनबाट स्वदेश तथा ओयल ट्याङ्करबाट विदेशमा ढुवानी गरिन्छ ।
ऊर्जा स्रोतविना हामीले अहिलेको स्तरको जीवन बिताउन सक्दैनथ्यौं । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अन्य उत्पादनका लागि पनि पेट्रोलियम पदार्थ र यसका प्रति उत्पादनको आवश्यकता पर्छ । जस्तै : कोठा तताउने तेल, जहाजको इन्धन, बच्चाहरूको डाइपर (कपडा), रासायनिक मल, लिपिष्टिक, स्याम्पू, साबुन, बडी स्प्रे, सेभिङ क्रिम, टूथपेष्ट, टायर र एस्पिरिन (औषधि)समेत बन्न पेट्रोलियम पदार्थ नै चाहिन्छ । अबस्पष्ट भयो, किन खाडी सम्पन्न भयो भनेर । यी त सीमित उदाहरण मात्र हुन् । अमेरिकामा ऊर्जाको माग सबैभन्दा बढी छ । पूरै दुनियाँको ५ प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या अमेरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि यो मुलुकले विश्वको तेल उत्पादनको २५ प्रतिशत खपत उत्पादन गर्छ । संसारभरिको इन्धन उत्पादनको ४५ प्रतिशत पेट्रोल र डिजेल त अमेरिकाले मात्र प्रयोग गर्छ । आर्थिक रूपमा बलियो हुँदै गएका ब्राजिल, रसिया, भारत र चीनजस्ता मुलुकलाई तेलजन्य पदार्थको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । जमीनमुनिको तेलको खजाना फेला पार्न र कुवा तयार गर्न खर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने कच्चा तेललाई प्रशोधन गर्ने प्रशोधनशाला स्थापना गर्न पनि खर्बौं रुपैयाँ नै लाग्छ । तेल निकाल्ने नयाँनयाँ प्रविधि आइसके पनि खर्बौंखर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा तेलजन्य उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने समाचारमा पढ्न र सुन्न पाइए पनि हाम्रो अहिलेको बजेटले धान्ने अवस्था छैन । अहिलेलाई सीमावर्ती मुलुकबाट कच्चा तेल पाइपलाइनबाट ल्याएर नेपालमै प्रशोधनशाला स्थापना गरी वितरण गर्न सके ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
खाडीको कुरा ग¥यौं, अब नेपालकै झाडी (वन)बाट रसाएर बनेका ससाना नदी र हिउँ नदीबाट अनवरत रूपमा बग्ने कञ्चन जल, हाम्रो सम्पदाकै कुरा गरौं । उत्तरको हिमशृङ्खला र पहाडको जङ्गल र चट्टानबाट रसाएर आएको पानी सीधै पिइन्छ । प्रकृतिले ‘गरी खाऊ’ भनेर सित्तैंमा दिएको सम्पदालाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । बरु हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई रोजगारीको लागि खाडीमुलुकमा पठाइरहेका छौं । यसो गर्नु भनेको नदीको प्रवाहमा उल्टो पौडेर मुहानतर्फ आउनुजस्तै होइन र ?
भनिन्छ, फर्पिङमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आउको समयमा चीनको बेइजिङमा विद्युत् नै थिएन । तर, विडम्बना आज हामीकहाँ चीनबाटै विविध क्षमताका लगानीकर्ता ओइरिइरहेका छन् भने केही प्रतिष्ठित कम्पनी त २५ देखि ५० मेगवाटसम्मका पारियोजना सम्पन्न गरेर पनि अरू परियोजनाको अध्ययन र परामर्श गर्दै छन् ।
ऊर्जा खेर जान्छ भन्नु अन्तिममा मर्ने मान्छेले मलामी पाउँदैन भन्नुजस्तै हो । बरु कतिमा उत्पादन गर्ने र कतिमा बेच्ने भन्ने विषय प्रमुख हो । उत्तरमा विशाल चीन, दक्षिणमा विशाल भारत र भारतसँगै जोडिएको बङ्लादेश ऊर्जामा भोका छन् । भारत र चीन दुवैले अबको १० देखि २० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन पूर्णरूपमा विस्थापन गर्ने भनी घोषणा नै गरिसकेका छन् । विकसित मुलुक कुवाको परनिर्भरताबाट मुक्ति चाहन्छन् ।
साँच्चै तपाईं आफ्नी आमालाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने भोलिको योजना के छ ? समीक्षा गारियोस्, नतिजा खोजियोस् । जन्म र शिक्षा स्वदेशमा, यौवन र कर्म विदेशमा बिताएर घर, समाज र देशको विकास हुँदैन । विगतमा भएका गल्तीहरूको समीक्षा गरेर अब ऊर्जा निकायले ‘एक घर एक सरकारी रोजगार’ दिन सक्ने गरी आधुनिक प्रविधिलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिगत सहजीकरण गरोस् ।